Xubin ka tirsan Al-Shabaab oo isku soo dhiibay Ciidanka Galmudug
HomeWararka SomaliyaXubin ka tirsan Al-Shabaab oo isku soo dhiibay Ciidanka Galmudug
November 6, 2021 Wararka Somaliya, Galmudug, Wararka Maanta 0
Ciidamo ka tirsan kuwa Daraawiishta ee dowlad Goboleedka Galmudug ayaa waxaa isku soo dhiibay Xubin ka tirsan Ururka Al-Shabaab, kaas oo lagu Magacaabo Deeq Cabdul Maciin, Al-Shabaab dhexdoodana looga yaqaanay Shiine.
Ninkaan ayaa muddo ka howlgalayay degaano kuyaal Koonfurta Gobolka Mudug, xilligii ay ka socdeen dagaaladii u dhaxeeyay Ciidanka dowladda iyo kuwa Galmudug oo dbinac ah & Al-Shabaab.
Deeq Cabdul Maciin oo Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in Al-Shabaab uu u qaabilsanaa dhigista miinooyinka, sidoo kalena sababta u uga soo baxay Al-Shabaab ay tahay dhibaatooyin kala duwan uu kala kulmay Al-Shabaab intii uu ka tirsanaa.
Dhowr jeer ayaa sidaan oo kale Ciidamada dowladda iyo kuwa Galmudug waxaa isku soo dhiibay Saraakiil iyo Xubno ka tirsanaa Al-Shabaab, kuwaas oo ka howlgeli jiray degaannada Galmudug.
Simon Mulongo oo ka Hadlay Ceyrintii Dowlada Somaliya Kula Dhaqaaqday